Zidane oo dab ku shiday xiddiga kooxda PSG ee Neymar Jr – Gool FM
(Madrid) 28 Nof 2019. Shabakada “Defensa Central” ee dalka Spain ayaa sheegtay in tababare Zinedine Zidane uu dab ku shiday xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, kaddib markii uu Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez uu kala hadlay arrimo ku saabsan suurtogalnimada uu ku doonayo saxiixiisa.
Shabakadan ayaa waxay tilmaamtay in tababare Zinedine Zidane uusan dooneynin inuu lasoo saxiixdo Neymar Jr, wuxuuna taasi badelkeeda doonayaa inuu diirada saaro heshiiska uu kula soo saxiixanayo xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Kylian Mbappé.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Zidane uu u sheegay Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez:
“Ma doonayo ciyaaryahan aan shaqeynin, kaliya waxaan aaminsanahay tayadiisa”.
Shabakada “Defensa Central” ayaa carabka ku adkeysay in Real Madrid aysan wax dalab ah miiska u saarin Paris Saint-Germain, si ay kaga hesho saxiixa ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona.
Real Madrid ayaa dooneysa inay Kylian Mbappé kala soo saxiixato kooxda Paris Saint-Germain si uu u noqdo hubka cusub ee kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Neymar Jr ayaa isna lala xiriirinayaa suurtagalnimada uu dib ugu laaban karo kooxdiisii hore ee Barcelona, xilli ciyaareedka soo socda, in kasta oo uu ka tagay Barca xagaagii 2017, si uu ugu ciyaaro PSG.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Arsenal Iyo Eintracht Frankfurt ee tartanka Europa League oo la shaaciyey